नाजिर हुसैनले श्रीकृष्ण श्रेष्ठका तर्फवाट लेखे मार्मीक स्टाटस्, ‘मरेको शरिर चितामा जलाइसकेपछि उठेर आउने भए प्रिय श्वेता म तिम्रो बिहेमा उपस्थित हुने थिए होला ‘ – Sandesh Press
December 7, 2020 163
काठमाडौ । अभिनेत्री श्वेता खड्का विवाह गर्दैछन् । उनले आफ्ना वेहुलासंगको तस्बिर सार्वजनिक गरिन् । विवाहकै दिन श्वेताले मेहन्दी लगाउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी हुन् । जुन तस्बिरमा उनका बेहुला देखिन्छन् । श्वेताले सार्वजनिक गरेको तस्विरमा कमेन्ट गर्दै नायक नजिर हुसेनले एउटा कमेन्ट गरेका छन् जुन अहिले भाइरल भएको छ । जुन कमेन्ट तल पढ्नुहोस **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
तिम्रो हरियालि जिन्दगिलाइ उजाड बनाउने म अझै पनि मलाइ नै सम्झेर बसेकि छ्यौ होला । अमुल्य जिबनको धेरै बर्ष मेरा नाममा तिम्रा आखा बाट खसेका आशुको मुल्य म कसरि तिरोरुरुरुहात पाखुरा गलेका तिम्रा ति अङ्गहरु सग मैले कसरि माफि मागौ । मलाइ पनि अनुभव गर्न मन छ !
पापको सजाय पाउन मन छ ! सगै सगै जिन्दगि कटाउछु भनेर बाचा कसम खाएको मान्छे एक्कासि बिच बाटो बाट नै अलपत्र हुदा कस्तो र कति पिडा हुन्छ त्यो मलाइ अनुभव गर्न मन छ । तिम्रो ठाउमा म भएको भए !! केहि समय पछि बिर्सने थिए होला । अर्कै सग फेरि सात जुनिको कसम खाएको हुने थिए होला । तिमिले त कसरि सक्यौ यतिका बर्ष सम्म मृत शरिरलाई सम्झेर कति मन अमिलो बनाएर अझै एक्लै पिडा सहेर बस्छ्यौ
म त तिमिलाई” धर्तिमा आउन मिल्न भए यो भन्ने थिए””” गर बिहे । यत्रो दिन सम्म एक्लै पारेको तिमिलाई समाजमा लाग्ने लाल्छान सबै म खान तयार छु तिमिलाई यदि कुनै पाप लागेछ भने म भोग्न तयार छु कम से कम मेरो पापको भारि कम होला
तिम्रो बिहेमा त मेरो आखाबाट केहि दिन सम्म आशु झर्ला !तर तिमिले मेरो नाममा यतिका बर्ष सम्म झारेका आशुको अगाडि सायद धेरै नै कम नै हुन्छ होला । सगेै जुनि कटाउछु भनेर खाएको कसम तोडिका कस्तो हुन्छरुरुरु त्यो अनुभन मैले पनि पाउनु पर्छ ।
Prevसरकारले नखोल भन्दा–भन्दै खोलिएका विद्यालयका ५१ विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
Nextरमेश प्रसाई र नन्दा सिंहको बैबाहिक जीवनबारे अलौकिक माताको सोच्नै नसकिने भबिष्यवाणी, यसो भनेपछि हेर्नुहोस
”मेरो फर्मुला गलत प्रमाणीत गर्ने कोही भए देश नै छोड्छु” मेमोरी किङ्ग विजय शाही, हेर्नुहोस भिडियो(भिडियोसहित)